किन गर्छन् महिलाले सम्भोग ? » Khulla Sanchar
किन गर्छन् महिलाले सम्भोग ?
टेक्सास यूनिवर्सिटीका प्रोफेसर सिंडी मेस्टन र डेविड बसले लेखेको बिताब ‘वाइ वुमन हेव सेक्स’ मा महिलाले सेक्स गर्ने करीब २०० कारणहरु उल्लेख गरेका छन् । अनुसन्धानका क्रममा एक महिलाले आफुले सेक्स गर्ने कारण आफ्नो लोग्नेको स्पर्म बाहीर निकाल्नु मात्र रहेको बताएकी छन् ।
अनुसन्धानमा सहभागी गराएका अधिकांश महिलाले पुरुष प्रति यौन आकर्षण नहुने बताएका थिए । अनुसन्धानका क्रममा मेस्टन र बसले बिभिन्न देशका एक हजार ६ महिलाको अन्तर्वार्ता लिएका थिए । अन्तर्वार्तामा महिलाले सेक्स गर्ने फरक/फरक कारणहरु बताएका थिए । उनीहरुको यो अनुसन्धानले महिलाले सेक्स गर्ने २३७ वटा कारण रहेको निष्कर्स निकालेका छन् । सो अनुसन्धानमा महिलाले शारीरिक, भावनात्मक र बस्तुगत कारणले सेक्सका लागि पहल गर्छन् । केही महिलाले रेपको डरले त केही त माँया पाउन पनि आफुले सेक्सका लागि पहल गर्ने गरेको बताएका थिए ।
‘पैसा, आफ्नो प्रवद्धर्न, लागूऔषध, बदला लिन, आफ्नो केटा साथीलाई जेलस बनाउन पनि महिला सेक्समा सहभागी हुने गरेको पाइयो,’ अनुसन्धानकर्ता मेस्टन भन्छन् । एक महिलाले टाउको दुख्ने समस्याबाटछुटकारा पाउनका लागि सेक्स गर्ने गरेको बताएकी थिइन् । १० जना महिलाले गिफ्ट पाउने लोभमा सेक्स गर्ने गरेको बताएका थिए ।
केही महिलाले डिनरका लागि त केहीले सपिङका लागि सेक्स गर्ने गरेको खुलासा गरेका थिए । यो अनुसन्धानमा सहभागी भएका विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत १० मध्ये ६ महिलाले ब्याफ्रेण्डभन्दा बाहीरका पुरुषसंग पनि सेक्स सम्बन्ध राख्ने गरेको बताएका थिए । यी मध्ये केहीले आफ्नो सेक्स परफमेन्स राम्रो बनाउन परपुरुषसंग सेक्स गर्ने गरेको बताएका थिए ।
यो अध्ययनमा सहभागी महिलाले अग्लो पुरुष मन पर्ने अधिकांशको भनाई थियो । एक महिलाले आफ्नो यौन रोग सार्न पनि सेक्स गर्ने गरेको बताएकी थिइन् । केहीले पुरुषको सुगन्ध मनपराएर सेक्समा सहभागी हुने गरेको बताएका थिए । केही महिलाले पूर्ण मनोरञ्जनका लागि मात्र सेक्स गर्ने बताएका थिए । अनुसन्धानले महिलाले मायाँका लागि र पुरुषले मनोरञ्जनका लागि सेक्स गर्ने निस्कर्ष निकालेको छ ।